Macallinka Man Utd ee Jose Mourinho oo sharraxay sababtii uu Anthony Martial maanta u seegay kulankii Watford – Gool FM
(Manchester) 13 Maajo 2018. Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankiisa Anthony Martial uu ku seegay kulankii maanta ay guusha ka gaareen Watford sabab la xiriirta dhaawac ku soo gaaray tababarka.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa la filayey inuu ku jiri doono shaxda kulanka ugu dambeeyay Man Utd ee Premier League xilli ciyaareedkan, iyadoo Mourinho uu isku diyaarinayo kulanka Sabtida soo aaddan ee Final-ka FA Cup-ka.
Laakiin shaxda safka hore ee Man United oo lagu dhawaaqay saacad ka hor kulankii ay ka badiyeen Watford ayaa si layaab leh looga waayey Martial, waxaana booska garabka bidix ku soo bilowday Ashley Young.
Macallin Mourinho ayaa shaaca ka qaaday in isbedelkaas uu ku sameeyey shaxdiisa ay sabab u tahay inuu indhaha ku hayo kulanka Final-ka FA Cup-ka oo ay la ciyaari doonaan kooxda Chelsea.
Horay waxa uu u sheegay macallinka reer Portugal in Martial uu ku soo bilaaban doono kulanka maanta laakiin ma dhicin, waxaana macallin Mourinho uu sababta ku sheegay dhaawac xiddiga reer France ku gaaray xerada tababarka.
Isagoo kulanka kaddib Saxaafadda la hadlayey ayuu yiri Macallin Mourinho: “Martial waa dhaawac, isagu waxa uu ku dhaawacmay tababarka Jimcihii, Shalayna ma nala tababaran.”
“Miyuu taam u noqonayaa kulanka Final-ka? Ma garanayo, waxaan ogahay in Romelu Lukaku uu soo laaban doono Talaadada, laakiin Anthony waa inaan sugaa.”